Ururka Al Shabaab, ayaa u muuqda mid xoojiyay xariga lagula kacaayo Saraakiisha Ururka – STAR FM SOMALIA
Ururka Al Shabaab, ayaa u muuqda mid xoojiyay xariga lagula kacaayo Saraakiisha Ururka, oo loo haysto inay u ololeynayeen ku biirista Ururka Daacish, balse isu magacaabay (Dowladda Khilaafada Islaamka).
Hawlgal qorsheysan oo ka dhacay Degmada Jilib Ee Gobolka Jubbada Dhexe, ayaa waxaa lagu xiray laba nin oo lagu kala magacaabo Maxamed C/laahi Sardheere iyo Khaalid Caytamow.
Sardheere waxa uu soo noqday Madaxii Maaliyadda ee Magaalada Kismaayo, halka Caytamow uu ka tirsanaa dhinaca Dacwadda ee Gobolada Jubbooyinka.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran Ururka Al Shabaab ee loo garanayo Amniyaadka, ayaa waxay u dhaceen guri ku yaala Degmadaasi Jilib, iyagoona ka soo kaxeystay labadaasi nin.
Labadan nin, ayaa waxaa loo haystaa inay u ololeynayeen sidii Shabaabka ku sugan Buuraha Galgala ugu biiri lahaayen Ururka Daacish.
Gobolada Jubbooyinka, ayaa waxaa si xowli leh ugu soo badanaya xariga loo gaysanayo xubnaha ka tirsan Ururka Al Shabaab, ee u ololeynayo inay ku biiraan Daacish.
Madaxda Al Shabaab, ayaa waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay ka digayeen inaanay loo ololayn karin ku biirista Daacish, maadaama ay iyagu heshiis kula jiraan Ururka Al Qaacidda.